Weerar lagu dilay ku dhowaad 10 Askari Burundeys ah oo ka dhacay gobolka Sh/dhexe.
Saturday September 14, 2019 - 16:21:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Balcad ayaa sheegaya in markale weerar dhiig badan ku daatay lagu qaaday ciidamo katirsan shisheeyaha Burundi.
Sawir hore Meydka Askari Burundeys ah oo Sh/dhexe lagu dilay
Dagaalyahanada Xarakada Al-Shabaab ayaa maanta duhuradii weerar dhabagal ah u dhigay ciidamo Burundi ah oo howlgal roondo ah ka sameynayay wadada u dhexeysa Balcad iyo Jowhar iyadoona halkaas ku laayay askar fara badan kuna soo ganiimeystay hub iyo saanad ciidan.
Weerarkan ayaa ka dhacay isla goobtii uu saaka ka dhacay qaraxii lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii Sh/dhexe Cabdullaahi Shetaawe iyo wasiirkii ganacsiga ee maamulkaas Sabriye Cusmaan.
Saraakiil ka tirsan Xarakada Al-Shabaab oo la hadlay Idaacada Andalus ayaa sheegay in weerarkaas lagu dilay ugu yaraan 10 askari oo Burundi ah, kuwaas oo todobo ka mid ah meydadkooda looga cararay goobtii lagu dagaalamay.
"Annaga ayaa indhaha saarnay meydadka todobo ka mid ah ciidamada gaalada, welina waxay yaallaan halkii lagu dagaalamay” sidaas waxaa Andalus u sheegay sarkaal ka mid ah ciidamada Al Shabaab.
Ciidamada Al Shabaab ayaa sidoo kale dagaalkaas ku soo ganiimeystay hub, rasaas iyo saanad ciidan oo ay ka carareen ciidamada Burundi waxaana la sheegay inay dib ugu noqdeen xerada Gololeey ee ay markii hore ciidamadaas laga soo diray.
Ciidamada AMISOM ee duullaanka ku jooga wadanka ayaa noqday kuwa ku go’doonsan saldhigyada ay ka joogaan wadanka waxaana marwaliba oo ay banaanka kaga soo baxaan saldhigyadaas ay la kulmaan weeraradan oo kale.
Dagaal 5 qof ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb.